20 Nwabele umdlalo we-Oxygen Facts for Kids
I-oksijeni (inombolo ye-atomic 8 kunye nesimboli O) enye yezo zinto awukwazi ukuhlala ngaphandle. Uyifumana emoyeni ophefumulayo, amanzi oselayo kunye nokutya okutyayo. Nazi ezinye iinkcukacha ezikhawulezayo malunga nale nto ebalulekileyo. Unokufumana ulwazi olunzulu malunga ne-oksijini kwiphepha leengqinsi ze- oxygen .
Izilwanyana kunye nezityalo zidinga i-oksijeni yokuphefumula.
I-oksijesi yegesi ayinakubalabala, ayinangqiqo, kwaye ayinakulungiswa.
Utywala kunye ne-oksijini eqinile yimibala eluhlaza.
I-oksijeni iyenzeka nakweminye imibala, kubandakanya obomvu, i-pink, i-orange kunye nomnyama. Kukho ne-oksijeni ebonakala ngathi yinyithi!
I-oksijeni ayikho isinyithi .
I-oksijesi igesi ngokuqhelekileyo yi-molecule ye-divalent O 2 . I-Ozone, O- 3 , yenye enye ifomu ye-oxygen ecocekileyo.
I-oksijeni isekela ukutsha. Nangona kunjalo, i-oxygen ecocekileyo ayiyi kutshisa!
I-oksijeni i-paramagnetic. Ngamanye amazwi, i-oksijeni ibuthathaka kakhulu kwintsimi yamagnetic, kodwa ayiyi kugcina i-magnetism engapheliyo.
Malunga no-2/3 ubunzima bomzimba womntu i-oksijeni kuba i-oksijeni ne-hydrogen yenza amanzi. Oku kwenza i-oksijeni iyona nto ininzi kakhulu emzimbeni womntu, ngobunzima. Kukho ii-athomu ezininzi ze-hydrogen emzimbeni wakho kunee-athomu ze-oksijeni, kodwa zixubusha ubunzima obuncinane.
I-oksijeni evuywayo yinto enobangela obomvu obomvu kunye nobomvu obuhlaza bombala we-Aurora .
I-oksijeni yayiyimiqathango ye- atomic weight for other elements until 1961 xa yatshintshwa yikhabhi 12. Ubunzima be-atomiki ye-oksijini ngu-15.999, edlalwa ngokukhawuleza ukuya kwi-16.00 ekubalweni kwekhemisti.
Ngelixa ufuna i-oksijeni ukuba uphile, ininzi kakhulu inokukubulala. Oku kungenxa yokuba i-oksijeni iyisisombululo. Xa kuninzi kakhulu, umzimba uphula i-oksijeni engaphezulu kwi-ion (i-anion) echaphazelekayo engalunganga. I-hydroxyl radical inokuveliswa, eyonakalisa i-lipids kwiimbrane zeseli. Ngethamsanqa, umzimba ugcina ukunikezwa kwe-antioxidants ukulwa noxinzelelo lwe-oxidative yosuku nosuku.
Umoya omile unama-21% oksijini, i-78% ye-nitrogen, kunye ne-1% nezinye iigesi. Nangona i-oksijeni ininzi kakhulu emoyeni, iyasebenza kakhulu kwaye ihlale izaliswa yi- photosynthesis evela kwizityalo . Nangona unokuqikelela ukuba imithi ingabakhiqizi abakhulu be-oxygen, kukholelwa ukuba i-70% ye-oksijini yamahhala ivela kwi-photosynthesis yi-algae eluhlaza kunye ne-cyanobacteria. Ngaphandle kobomi obenza ukubuyisela i-oksijeni, umoya uya kuba ne-gas encinane kakhulu! Iingcali zenzululwazi zikholelwa ukuba ukufumana umoya we-oxygen kwisimo sezulu seplanethi ingaba luphawu olulungileyo oluxhasa ubomi, ekubeni lukhutshwa yizinto eziphilayo.
Kukholelwa kakhulu isizathu sokuba izilwanyana zinkulu kakhulu kwixesha eliphambi kwexesha lokuba i-oksijeni ibakho kwiinkomfa eziphezulu. Ngokomzekelo, iminyaka engama-300 yezigidi edlulileyo, iinqwelwane zazikhulu njengeentaka!
I-oksijeni yinto yesithathu eyona nto ininzi kwindalo yonke. Isakhi senziwe ngeenkwenkwezi ezimalunga namaxesha angama-5 ngaphezulu kwelanga. Ezi nkwenkwezi zitshisa i-carbon okanye i-helium kunye nekhabhoni. Ukuphendula kwefusion kwakha i-oxygen kunye nezinto ezinzima.
I-oxygen yendalo iqukethe i- isotopi emithathu, e-athomu enenani elifanayo leeprotoni, kodwa manani ahlukeneyo e-neutron. Ezi i-isotopu zi-O-16, i-17, kunye no-18. I-oksijeni-18 iyona mininzi kakhulu, ijongene ne-99.762% yelungu.
Enye indlela yokuhlambulula i-oksijeni kukukhupha umoya ococekileyo. Indlela elula yokwenza i-oksijini ekhaya kukubeka iqabunga elitsha kwikomityi yamanzi kwindawo ekhanyayo. Uyabona iibhola ezakha emaphethelweni eqabana? Ezi zine-oxygen. I-oksijeni ingafumaneka kwakhona nge- electrolysis yamanzi (H 2 O). Ukuqhutywa kwamandla okwaneleyo okwaneleyo wamanzi ngamanzi kunika iamolekyu amandla anele ukuphula izibopho phakathi kwe-hydrogen ne-oxygen, ukukhulula igesi ecocekileyo yento nganye.
U-Priestly uJoseph udla ngokufumana iitaliti ngokufumanisa i-oksijini ngo-1774. UCarl Wilhelm Scheele usenokuba wathola into ebuyele ngo-1773, kodwa akazange ashicilele ukufunyanwa kwaze kwafika emva koMbingeleli.
Izinto ezimbini kuphela i-oksijeni ayenzi i-compounds with the gases helium neon. Ngokuqhelekileyo, ii-athomu ze-oksijini zinombuso we-oxidation (umrhumo wombane) we--2. Nangona kunjalo, amazwe ase-+2, +1, kunye ne--1 oxidation aqhelekileyo.
Amanzi amanzi aqule malunga ne-6.04 ml ye-oksijeni echithwe ngeyure nganye, ngelixa amanzi asemanzini equle malunga ne-4.95 ml ye-oksijini.
Iimpawu zePiano Music II
24 Amawebhusayithi amaGcisa aBafundi beKholeji
AbaThiver Shiites, okanye iIthna Ashariyah
Indlela yokufikelela kwisikolo se-Ivy League